Al-shabaab oo dilay Dameero u rarnaa ganacsatada Waajid. | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Al-shabaab oo dilay Dameero u rarnaa ganacsatada Waajid.
Al-shabaab oo dilay Dameero u rarnaa ganacsatada Waajid.
Kooxda Nabad-diidka Al-Shabaab ayaa dhabbaha u galay Gaari dammeero siday raashiin ay lahaayeen Ganacsatada degmada Waajid ee Gobolka Bakool,iyagoona gubay ku dhawaad 10-gaari dammeer iyo raashiikii u rarnaa Ganacsatada degmadaasi.
C/qaadir Nuur Goome oo ah Guddoomiyaha Ciyaaraha degmada Waajid ee Gobolka Bakool oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab deegaan duleedka ka ah degmada Waajid ay ku dileen ku dhawaad 10-dammeer ah,islamarkaana ay gubeen raashiinkii saarnaa oo u rarnaa Ganacsatada degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Dammeerada Raashiinka siday ayaa ka soo ambabaxay deegaanka Ceelboon waxayna ku sii jeedeen degmada Waajid.
“ deegaano banaanka ka ah degmada Waajid ayaa kuwii Shabaabka ahaa wadada u galeen Kareetooyin Raashin sida (Gaari Dameero) degmada u soo socday,dameeradii wey dileen raashiinkiina wey gubeen”,ayuu yiri Guddoomiye Goome.
Guddoomiyaha Ciyaaraha degmada Waajid C/qaadir Nuur Goome ayaa sheegay in ragii waday dameerada ay ka soo baxsadeen Kooxda Al-Shabaab,islamarkaana degmada ay yimaadeen,isagoona dhanka kale tilmaamay iney tageen deegaanka ay Shabaabka ku gubeen raashiinka durbana maleeshiyaadka goobta isaga baxsadee..
Wuxuu sheegay in hanti badan oo lagu qiyaasay 50-dollar goobta ay kaga baaba’day Ganacsatada degmada Waajid ee Gobolka Bakool,waxaana hadda wada hadalo u socda Ganacsatada Raashiinka laga gubay iyo maamulka degmada Waajid,sida uu Guddoomiye Goome sheegay.
Previous articleKa Hortagga Kharta Kaallimaha Shidaalka iyo arrimo kale oo la isku weydiiyay kulankii golaha wasiirada Puntland.
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo u amba baxay dalka Uganda.